Indlu ye-Eco Garden e-Old Leptokarya, e-Pieria, eGrisi - I-Airbnb
Indlu ye-Eco Garden e-Old Leptokarya, e-Pieria, eGrisi
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguGiorgos
Indlu efama ekuthiwa yi-Eco yindawo yeholide eqeshisayo e-Old Leptokarya, kufutshane nentaba yeOlimpiki engummangaliso ejongene nolwandle lwaseMzantsi Pieria. Iilwandle kunye neziko leLeptokarya kumgama weekhilomitha eziyi-3 ngemoto (iimitha eziyi-200 ayingomgwaqo one-asphalt).
Umbane namanzi ashushu aphuma kakhulu kwiipaneli ze-solar, ngoko indlu ilungele indalo yonke.
Le ndlu inamagumbi okulala ayi-2 ayiphelelanga nje kumandla ombane namanzi ashushu aphuma kwiipaneli ze-solar kodwa nezinto ezinokonwatyelwa iindwendwe ezinokuzifumana ngokuziqokelela zize zinambithe iziqhamo ezisandul 'ukuvunwa kwimithi yegadi yabucala ekwisakhiwo esine-4,000 sq.m egcwele imithi yomnquma, imithi ye-cherry, i-peach ect.
I-Eco Farm House ikude ngeemitha eziyi-200 ukusuka kubamelwane abakufutshane, ngoko yindawo efanelekileyo yokuphumla.
Ngaphandle kwengxolo yesixeko kwaye kufutshane nezandi zendalo zokwenene, yindawo efanelekileyo yabantu abanobomi obungathethekiyo abafuna ukuzikhupha iintsuku ezimbalwa.
Ngondwendwe ngalunye olutsha siye sabeka indawo yokudibana eLeptokarya okanye xa kuphunywa kwindlela yesizwe i-E75. Sibaqhubela endlwini, apho sibabonisa zonke izinto eziyimfuneko ekufuneka bezazile ngendlu.
Xa kubhukishwe iintsuku eziyi-6 nangaphezulu, siza neetawuli ezicocekileyo qho emva kweentsuku eziyi-3 ukuya kweziyi-4, kuxhomekeka kwimpumelelo yeendwendwe.
Iindwendwe zinokucela inkcazelo, iinkcukacha okanye zixele nayiphi na ingxaki ezijongene nayo nanini na emini nasebusuku kwinombolo ethi "sos" esizinika zona.
Ngomhla wokugqibela, sifika endlwini ngexesha lokuhamba elibekiweyo ukuze sithathe izitshixo size sithi bhabhayise.
Ngondwendwe ngalunye olutsha siye sabeka indawo yokudibana eLeptokarya okanye xa kuphunywa kwindlela yesizwe i-E75. Sibaqhubela endlwini, apho sibabonisa zonke izinto eziyimfuneko…
Inombolo yomthetho: 00000242527